Madaxa Shirkada Vox oo xilka kadagaya – Balcad.com Teyteyleey
Madaxa Shirkada Vox oo xilka kadagaya
By Abdallah Hassan	 On Sep 28, 2017
Ezra Klein Milkiilaha Shebekeda caalmiga wararka iyo madadalada ee loo yaqaano VOX ayaa ku dhawaaqay in ka degi doono jagada ugu sareeysa hayada VOX uu ka ah Madaxa Tafatirka guud. waxaana uu dhinac kasii ahaan doonaa hoowsha VOX qeeybaha maashaariicd horumarinta iyo baahint ganacsigiis
Ezra Klein waxaa uu dhashay 1984 Dalka Amerika Irvine, California USA . waxaa u waxkabartya jaamcada University of California Los Angeles
Vox waa shebeked online media taa ah midkamid kuwa ugu afka dheer aduunka waxaan ay faafisaa wararka, xayeesiinta, filimaanta iyo doodaha aduunka kuwa uu muhiim san. waa shirkad weeyn fadhigeda ayahay cariga Amerika
ganacsadahan dada yar ayaa ah mid kusoo kordhiyey dunida ganacsi casri baahi weeyn loo qabay. waxaana uu abuurary fursado shaqo boqolaal qofood. waxa ku xiran adeegyad hayadiis qabato kumaan kun qofood daafaha aduka ku kalanool
dhaliyarada waxbaratay waa in ay la yimaadan fikir iyo hal abur wax ka tarikara bahida ka jirta dalkooda si ay uga haqabtiraan. waxaa nasiib in aad waxbarto, waxaana kasii wanaagsan in hadan waxii aad bartay ama abuurtay ay noqdaan waxa bulshada dalkada iyo aduunka ka faaiideysan karaan
The post Madaxa Shirkada Vox oo xilka kadagaya appeared first on Ilwareed Online.
War Murtiyeed: Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanka GALMUDUG